Religious Riots are Trump Cards for Dictators and Dirty Politicians | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Mosque building halted in Burma’s Kachin state
Balkanization of Myanmar »
SOURCE: General Aung San: Dirty politics of using Ultranationalism to get popular support
RELIGION is the Trump card of dirty politicians and dirty governments
They say politics is dirty.
They say politics is religion.
They say these all in contradiction with each other in one and the same breath.
Politics is religion! Is it?
Of course not. But this is the trump card of dirty politicians.
they hope to confuse and befog the public mind,
and they hope to slur over and cloud real issues.
Theirs is the way of opportunism, not politics.
Religion isamatter of individual conscience while politics isasocial science.
Of course, asasocial science, politics must see that the individual also has his rights, including the right to freedom of religious worship.
But here we must stop and draw the line definitely between politics and religion, because the two are not one and the same thing.
If we mix religion with politics, this is against the spirit of religion itself,
for religion takes care of our hereafter
and usually has not to do with mundane affairs which are the sphere of politics.
And politics is franklyasecular science. That is it.
You haveatremendous role to play.
This is the highest politics which you can do for your country and people.
Go amongst our people,
preach the doctrine of unity and love;
carry the message of higher freedom to every nook and corner of the country,
freedom to religious worship,
and spread the Dharma anywhere and anytime,
freedom from fear, ignorance, superstition, etc.,
teach our people to rely upon themselves
and re-construct themselves materially, spiritually and otherwise.
You have these and many more noble tasks before you.
Every student of social and political science knows very well that_
such slogans as race, religion, language do not alone constitute nationalism.
Each of us isapolitical animal as Aristotle declared
Politics means your everyday life. It is you in fact; for you areapolitical animal as Aristotle long ago declared.
It is how you eat, sleep, work and live, with which politics is concerned.
You may not think about politics. But politics thinks about you.
You may shun politics. But politics clings to you always in your home, in your office, in your factories.
There, everyday you are doing politics, grappling with it, struggling with it.
The worker works for his wages, the peasant tills for his living, the clerk and the official toil for salaries, the trader and the broker struggle for decent incomes.
It is, all, the question of livelihood.
The worker wants to have higher wages and live in better conditions.
The peasant desires to improve his land and his lot.
The clerk and the official want something more than the drudgery of office, something more secure, more complete, and more independent.
The trader and broker want fair opportunities for trading and business.
Thus you have to live and get certain things that are yours for your living, and this is your politics. This is your everyday life; and as your everyday life changes, so changes your politics.
It is for you to have such opportunities for your livelihood and better life that we say there must be freedom,
freedom to create and develop nationally, and individually,
freedom which can raise your and our standards without affecting others.
And this is politics. Politics then is quite human!
It is not parochial.
It is neither magic nor superstition.
It is not above understanding.
Politics became “Dirty” when mixed with Religion (drkokogyi.wordpress.com)
Pressure on secularism (vicrram.wordpress.com)
Time To Put Legal Limits On Religious Privileges (lincolnshirecommentator.wordpress.com)
SSPX on “Religious Freedom” (mundabor.wordpress.com)
Tyranny, Religion, and the Fight for Freedom (insightscoop.typepad.com)
Rob Boston: Is There A War On Religion? No…. But There Is A Religious Right/Catholic Hierarchy Attack On Individual Freedom (alwaysquestionauthority.com)
Why Religion? (irreligiousblog.wordpress.com)
Book Review: Freedom of Religion & The Secular State – Bruce Everett – Rousing Departures (richarddawkins.net)
Tags: Aristotle, Dharma, Freedom of religion, Personal life, Politics, Religion, Social science, United States
This entry was posted on April 18, 2012 at 6:35 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
7 Responses to “Religious Riots are Trump Cards for Dictators and Dirty Politicians”
May 15, 2012 at 2:20 pm | Reply
[…] Religious Riots are Trump Cards for Dictators and Dirty Politicians (drkokogyi.wordpress.com) […]
February 22, 2013 at 2:08 pm | Reply
“ဗုဒ္ဓဘာသာထဲမှာ လူတပိုင်း ဘုန်းကြီးတပိုင်းဖြစ်နေတာတွေကို တပည့်တော်တို.မကြိုက်မနှစ်သက်ဘူး”။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း–၂၃-၂-၁၉၄ရ တနင်္ဂနွေနေ. ၁ နာရီ တွင်ရန်ကုန်မြို.တော်ခန်းမ
March 16, 2013 at 3:56 am | Reply
FB of Mohammed Naeem>>>
အရင်တုန်းက သတင်းတွေမှာ ဒီမိုကရေစီဘိုးအေ နိုင်ငံတွေက Dirty Politics အကြောင်း ကြည့်ရ၊ ဖတ်ရတော့ ညစ်ပတ်တဲ့အုပ်စုကို လက်ရှိကိုယ်တွေကြုံနေရတဲ့ အစိမ်းရောင်ဝတ်တွေနဲ့ ယှဉ်ပြီး ခံစားမိတော့ မုန်းမိတယ်။
တကယ်တမ်း ကိုယ်တွေ နေထိုင်တဲ့ နေရာမှာ ကြုံလာရတဲ့ Dirty Politics အကြောင်း မြင်ရ၊ ကြားရတော့ အံ့သြရတယ်။ လူတွေဟာ တကယ်ပဲ နိုင်ငံရေးသမား လက်တစ်ဆုပ်စာ လူတန်းစားတွေအတွက် အသုံးချခံတွေ ဖြစ်မှန်းမသိ ဖြစ်သွားကြရတယ်။
နိုင်ငံရေးသမားတွေ ဒီမိုကရေစီ စနစ်နဲ့ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်း ခံရတယ်ဆိုတာ ဟုတ်သလိုလို ရှိပေမဲ့ သူတို့တွေရဲ့ နောက်ကွယ်မှာရှိနေတဲ့ Background တွေဟာ Dirty Politics နဲ့ တစ်နည်းမဟုတ် တစ်နည်း ပတ်သက်နေလေ့ရှိပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်အတွက် အနစ်နာခံတတ်ကြတာမျိုးတွေ့ရပေမဲ့ အမှန်တရားနဲ့ ပတ်သက်လာရင် နှာစေးကြတာပါပဲ။ အမုန်းခံလုပ်တဲ့သူက ဘက်မလိုက်တတ်တဲ့ အမှန်တရားဘက်တော်သားဖြစ်ရင် အာဏာရဖို့ အိပ်မက်တောင် မက်လို့မရဘူး။
အာဏာရခေါင်းဆောင်တွေက အာဏာတည်မြဲရေးအတွက် အတိုက်အခံကို ချောက်တွန်းမယ်။ ပြည်သူနဲ့ ရန်တိုက်ပေးမယ်။ ဓါးခုတ်ရာ လက်ဝင်လျှိုခိုင်းမယ်။ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး ပဋိပက္ခတွေ ဖန်တီးမယ်။ လူများစု အကြိုက်တွေ့ရင်ပြီးရော လူနည်းစုကို တရားမဲ့ နှိပ်စက်ပြမယ်။ အတိုက်အခံတွေက လူနည်းစုဘက်က မပါရဲလောက်အောင် လူများစုကို လမ်းကြောင်းဟပေးပြီး ထိန်းထားမယ်။ ဒီမိုကရေစီ နဲ့ အတူတူ ထပ်ချပ်မကွာပါရမဲ့ ပြည့်ဝတဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး နှင့် လူသားတိုင်း အခွင့်အရေး သာတူညီမျှရှိရေး မပါလာလို့ကတော့ ခရိုနီကောင်းစားရေး နဲ့ တိုင်းပြည်ရောင်းစားရေး ဒီမိုကရေစီ ကနေ တက်လာဖို့မရှိဘဲ ပြည်သူတွေဘဝသာ လုံးပါးပါးနေမှာသာ ဖြစ်ပါတယ်။
March 29, 2015 at 3:54 am | Reply
Kyaw Win added4new photos.
တစ်ကျော့ပြန် ယုတ်မာမှု …….
၂၅-၃-၂၀၁၅ နေ့က ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အပါအဝင် တက္ကသိုလ်အချို့မှာ မွတ်စ်လင်မ်ဆန့်ကျင်ရေး ဝါဒဖြန့်စာရွက်တွေကို တက္ကသိုလ်ဝင်းထဲအထိ ဝင်ရောက်ဝေငှလာပါတယ်။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေက အဖမ်းဆီးခံကျောင်းသားများ လွတ်မြောက်ရေးနဲ့ ပညာရေးဥပဒေပြင်ဆင်ရေးစာရွက်တွေထင်ပြီး ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့မှ မွတ်စ်လင်မ်ဆန့်ကျင်ရေးအတွက် မဟုတ်မမှန်လုပ်ကြံဝါဒဖြန့်ထားတဲ့ စာရွက်တွေဖြစ်နေလုိ့ ဆရာ/မ တွေကို အသိပေးပါတယ်။ တက္ကသိုလ်တစ်ခုမှာတော့ စာရွက်ဝေတဲ့လူကို ဖမ်းဆီးပြီး သက်ဆိုင်ရာ ရဲအထူးထောက်လှမ်းရေးကို အပ်လိုက်တော့ ဖမ်းဆီးသူရဲနဲ့ အဖမ်းခံရသူတုိ့ဟာ မိတ်ဟောင်းဆွေဟောင်းတွေလို အပြုံးမပျက် ပြန်လည်ထွက်ခွါသွားကြပါတယ်။
သည်လိုမွတ်စ်လင်မ်ဆန့်ကျင်ရေး ဝါဒဖြန့်စာရွက်တွေကို ၁၉၉၀ပြည့်လွန်နှစ်များကစပြီး “အမျိုးပျောက်မှာစိုးကြောက်လှပါသည်” … ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ တပ်မတော်သားတွေအတွင်းမှာ စတင်ဖြန့်ဝေခဲ့တာပါ။ အကျိုးဆက်အနေနဲ့ တောင်ငူနဲ့ ကျောက်ဆည်ဘက်မှာ မွတ်စ်လင်မ်တွေအပေါ် အကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ်မှုတွေပေါ်လာပြီး NLD နဲ့ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကျနေတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပေါ်ရောက်နေတဲ့ အများပြည်သူရဲ့ အာရုံကို ပြောင်းဖုိ့ကြိုးစားခဲ့တာပါ။
အခုအချိန်ဟာ ကျောင်းသားထုအတွင်းမှာ အဖမ်းဆီးခံကျောင်းသားများ လွတ်မြောက်ရေးနဲ့ ပညာရေးဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဘက်ကို အာရုံရောက်နေတဲ့ အချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ မတ်လ(၂၇)ရက်နေ့ နံနက်(၁၀)နာရီမှာ တစ်နိုင်ငံလုံးကျောင်းသားတွေ ဆန္ဒပြမှာကို အာရုံပြောင်းဖုိ့အတွက် လူမျိုးရေး၊ဘာသာရေး အဓိကရုန်းတွေဖြစ်အောင် ယုတ်မာအောက်တန်းကျစွာ လုပ်ကြံမှုဖြစ်ပါတယ်။ စာပါအကြောင်းအရာတွေကို ကြည့်လိုက်တာနဲ့ ဘယ်သူတွေရဲ့လက်ချက်ဆိုတာကို အသေအချာသိနိုင်ပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲနီးလာတာနဲ့အမျှ အခုလို အောက်လမ်းနည်းနဲ့ အာရုံပြောင်းကြိုးစားမှုတွေ ဆက်တိုက်ဖြစ်လာမှာပါ။ နှစ်ဖက်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းက ပညာဥာဏ်နဲ့ ဆင်ခြင်တုံတရားနည်းပါးသူတွေ၊ အစွန်းရောက်သူတွေကလည်း လူယုတ်မာတွေရဲ့ အသုံးချခံပစ်မှတ်တွေဖြစ်နေဦးမှာပါ။ ဒါ့ကြောင့် ……
းးး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်စစ်စစ်များခင်ဗျား ….. ဒေဝဒတ်ရဲ့နောက်လိုက် အလ္လဇ္ဇီတွေရဲ့ အန္တရာယ်ကို အထူးသတိပြုရှောင်ရှားကြပါ။
းးး အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များခင်ဗျား ….. မန္တလေးမြို့မှ အဗူဂျာဟိလ်နဲ့ ရန်ကုန်မြို့မှ အဗူလဟဗ်တုိ့ရဲ့ နောက်လိုက်မျက်ကန်းမျိုးချစ်များရဲ့ ထောင်ခြောက်တွင်း မသက်ဆင်းမိဖုိ့ အထူးသတိပြုကြပါ။
းးး ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များခင်ဗျား ….. နေပြည်တော်ရှိ စေတန်(Satan) နဲ့ သူ့နောက်လိုက် စွမ်းအားရှင်များရဲ့ ရန်တိုက်ပေးမှုမှ နားမယောင်မိစေဖုိ့ အထူးသတိပြုကြပါ။
းးး ဘာသာမဲ့(Atheists)များခင်ဗျား ….. ဒီမိုကရေစီရဲ့ရန်သူ၊ ကိုယ်ကျိုးရှာအာဏာရှင်များရဲ့ လက်ပတ်နီလူဆိုး၊လူမိုက်များ၏ အောက်တန်းစားလုပ်ရပ်များကို အထူးသတိပြုကြပါ။
Various types of political leaders | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi Says:
January 2, 2016 at 4:13 am | Reply
[…] January 2, 2016 drkokogyi 1/ Good political leaders must not only have the charisma to simply lead the people but should able to enlighten the people and change their mindset to the right path and lead them. 2/ But most of the political leaders lead by rhetoric and simply use to play to the gallery. Most of them are hypocrites who used to put onafalse appearance of virtue or religion but acting in contradiction to his or her stated beliefs or feelings. 3/ Dirty politicians, failed politicians and most of the dictators around the world misuse the Patriotism or love of the people’s race, religion and nationalism and plant hatred to all those are different from them to get the power or to be able to continue ruling the country. To give few examples from Myanmar politics, General Aung San was in number (1) category. Daw Aung Sann Suu Kyi, Oo Tin Oo and most of the NLD leaders are in number (2) category. All Myanmar Military and USDP leaders are obviously in the last number (3) group. xxxxxxxxxxxxxxx 1/ DASSK isaCharismatic leader like her father, General Aung San and U Nu. 2/ Rhetoric 3/ play to the gallery › to behave inaway intended to make people admire or support you: Politicians these days are more interested in playing to the gallery than exercising real influence on world events. 4/ Hypocrite 5/ Religious Riots are Trump Cards for Dictators and Dirty Politicians […]
November 30, 2021 at 12:26 pm | Reply
▪️Separation of State and Church
ဘာသာရေးကဒျဟာ အာဏာရှငျတှရေဲ့ နောကျဆုံးခံတပျပဲ တဲ့။ ဖကျဆဈတပျမိသားစုတှေ ဘုရားတရားလုပျ ပဌာနျးရှတျနကွေကွောငျး သတငျးတှတေကျလာတော့ နောကျဆုံးခံတပျ နောကျဆုံးကဒျ ရောကျနတေဲ့အခွအေနပေေါ့။ “အမြိုး၊ဘာသာ၊သာသနာကို ကာကှယျတဲ့စဈတပျ”လို့ ကွှေးကွျောထားတဲ့ ဘာသာရေးfanaticဖကျဆဈတပျနဲ့ စဈကောငျစီက ဘာသာရေးကဒျကို အမွဲတမျးအသုံးခနြကေမြို့လို့ အခုလညျး အဆနျးမဟုတျပါဘူး။
မွနျမာမှာရော လူသားသမိုငျးတလြှောကျမှာရော ဘာသာရေးအီလဈ‌တှနေဲ့ အာဏာအီလဈတှေ ပေါငျးပွီးတိုကျခဲ့တဲ့ ဘာသာရေးအမညျခံစဈပှဲကွီးတှေ အထငျအရှားရှိတယျ။ ဗုဒ်ဓဘာသာ၊ ခရဈယာနျ၊ အစ်စလာမျ အစရှိသဖွငျ့ ဘာသာတိုငျးလိုလို စဈပှဲကွီးတှေ ဆငျနှဲခဲ့ကွဖူးပွီး အခုထိလညျး ပဋိပက်ခတှေ ဆကျရှိနသေေးတုနျးပဲ။ ဘာသာရေးစဈပှဲကွောငျ့သရေတဲ့လူအရအေတှကျနဲ့ တခွားစဈပှဲတှကွေောငျ့သရေတဲ့လူအရအေတှကျ ယှဉျကွညျ့ရငျ ဘယျဟာကွောငျ့ လူပိုသရေတယျထငျပါသလဲ။ သမိုငျးဆိုးသငျခနျးစာတှအေရ Separation of State and Church နိုငျငံတျောနဲ့ဘုရားကြောငျးကွား ခှဲခွားခွငျး (နိုငျငံရေးနဲ့ဘာသာရေး ခှဲထားခွငျး)ကို အမရေိကနျအပါအ၀ငျ အနောကျဒီမိုကရစေီနိုငျငံကွီးတှမှော ကငျြ့သုံးလာခဲ့ကွတယျ။ ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈ ဘာသာရေးနဲ့နိုငျငံရေးဟာ အမွဲလိုလို လူ့အသိုကျအ၀နျးထဲမှာ ဒှေးရောယှကျတငျ လှမျးမိုးတဲ့အရာ‌တှဖွေဈတယျ။
Unwritten rulesတှေ ရှိကွပမေယျ့၊ တိုးတကျတဲ့လူ့အဖှဲ့အစညျး‌မှာတော့ ဘာသာရေးကိုနိုငျငံရေးမှာအသုံးခတြာ ဘာသာရေးမှာနိုငျငံ‌ရေးကိုအသုံးခတြာကို Written ruleအနနေဲ့ မရှိကွတော့ပါဘူး။ မွနျမာမှာကတော့ အခှငျ့ထူးခံ နိုငျငံတျောဘာသာအဖွဈ written ruleရှိတဲ့အပွငျ unwritten rulesပေါငျး သောငျးခွောကျထောငျ ရှိနတောပါ။
ပွောခငျြတာက ကမြတို့တညျထောငျကွမယျ့ အနာဂတျနိုငျငံသဈနဲ့ လူ့အဖှဲ့အစညျးသဈအကွောငျးပါ။ လောလောဆယျ- ဖကျဒရယျဒီမိုကရစေီပဋိညာဉျ အစိတျအပိုငျး(၁)မှာ နိုငျငံရေးနှငျ့ဘာသာရေးနဲ့ ပတျသတျလို့ –
“ဖကျဒရယျပွညျထောငျစုသညျ နိုငျငံရေးနှငျ့ဘာသာရေး ရောယှကျခွငျးမရှိသော၊ ဘာသာရေးကို အခွမေခံသော နိုငျငံရေးစနဈကို ကငျြ့သုံးသညျ။” လို့ ရေးဆှဲကွညောထားပါတယျ။
ဟိုးအရငျ FCDCCရဲ့ ဖကျဒရယျဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒမေူကွမျးမှာလညျး ဒီမူကိုပဲ တျောလှနျရေးအငျအားစုတှကေ ရပျတညျရေးဆှဲထားခဲ့ကွတာ ဖွဈတယျ။
တခြိနျတညျးမှာ ဘာသာရေး လှတျလပျစှာကိုးကှယျယုံကွညျခှငျ့ကိုလညျး အာမခံ အကာအကှယျပေးပွဌာနျးဖို့ လိုပါတယျ။
“ပွညျထောငျစုနိုငျငံသားတိုငျးသညျ ဇာတိ၊ ကိုးကှယျရာဘာသာ၊ အဆငျ့အတနျး၊ ကြား – မ၊ လိငျစိတျ ခံယူမှု၊ မသနျစှမျးမှု၊ အသား အရောငျ၊ လူမြိုး၊ အသကျအရှယျ အပျေါမူတညျ၍ ခှဲခွားခံရခွငျး မရှိစရေဘဲ အလုပျရှေးခယျြပိုငျခှငျ့နှငျ့ အလုပျ လုပျပိုငျခှငျ့ အခှငျ့အရေး ရှိစရေမညျ” လို့လညျး ရေးဆှဲထားပါတယျ။
ဒါတှဟော ယဉျကြေးတဲ့ကမ်ဘာအတှကျတော့ အခွခေံလူ့အခှငျ့အရေးတှပေါပဲ။ ဒါပမေဲ့ လူမြိုးပေါငျးစုံ ဘာသာပေါငျးစုံ ဖွဈတညျမှုပေါငျးစုံ နထေိုငျကွတဲ့နိုငျငံမှာ ဘာသာတခုတညျးကို နိုငျငံတျောဘာသာအဖွဈပွဌာနျးထားပွီး ‌”မဟာပုရိသဗမာဗုဒ်ဓ”ဆိုတဲ့ အိုငျဒနျတတီတခုကို အသာစီးဖနျတီးလှမျးမိုးခြုပျကိုငျအသားကနြလောခဲ့တဲ့ အယူသီးမွနျမာစဈတပျအသိုကျအ၀နျးအတှကျတော့ အဆနျးတကွယျဖွဈခငျြ ဖွဈနမှောပေါ့။ သူတို့ supremacy လကျလှတျဆုံးရှုံးရမယျ့အဖွဈကို တုနျလှုပျနတေဲ့ လကျယာစှနျးဖကျဆဈတှဟော ဒီလိုအခွခေံလူ့အခှငျ့အရေးနဲ့ပရငျစီပယျတှကေို “ဘာသာမဲ့” “ကှနျမွူနဈ”အဖွဈ ကွားဖူးနားဝတှေ တံဆိပျကောကျတပျပွီး ‌စှပျစှဲပွနျကနျကွဦးမှာလညျး အဆနျးမဟုတျပါဘူး။ “ငါတို့ဘာသာရေးအပျေါ အတိုကျခိုကျခံနရေပွီ၊ ငါတို့ခွိမျးခွောကျခံနရေပွီ” ဆိုတဲ့ ဖဲခပျြကိုသုံးတတျတာလညျး အဆနျးမဟုတျပါဘူး။ တကမ်ဘာလုံးက ဖကျဆဈတှကေ အဲဒီ့အခြိုးအတိုငျးပါပဲ။
ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈ ခှငျ့တူညီမြှ တရားမြှတ လှတျလပျငွိမျးခမျြးပွီး ခှဲခွားဆကျဆံမှုမရှိတဲ့ နပြေျောစဖှယျ နိုငျငံလေးတခု တညျထောငျကွဖို့အတှကျ အနာဂတျမှာ ဘယျဘာသာရဲ့ မဘသဖကျဆဈတပျမှ ခေါငျးမထောငျတော့ဖို့ လိုတယျ။ “ဖကျဒရယျပွညျထောငျစုသညျ နိုငျငံရေးနှငျ့ဘာသာရေး ရောယှကျခွငျးမရှိသော၊ ဘာသာရေးကို အခွမေခံသော နိုငျငံရေးစနဈကို ကငျြ့သုံးသညျ” ဆိုတဲ့ အခွခေံမူတှေ ရှိနပွေီမို့ တျောလှနျရေးအငျအားစုတှဘေကျမှာ အနညျးဆုံးတော့ ရှခွေ့လှေမျးကောငျးတှလှေမျးပွီး လိုရာရောကျနိုငျဖို့အတှကျ ဖိနပျကောငျးတရံ ရှိနပေါပွီ။
နိုဝငျဘာ ၂၉၊ ၂၀၂၁
April 5, 2022 at 5:59 am | Reply
မွနျမာပွညျရဲ့ ၁၉၈၈ အရေးအခငျးမှာ
ပဈသတျ ဖမျးဆီးနှိပျစကျ ထောငျခခြွငျးခံ
ဖွဈပှါးနတေဲ့လူမြိုးရေး ဘာသာရေး
မြိုးခဈြဆိုတဲ့အမြိုးသားရေးအုပျစုကွီးက
စညျးကမျးရှိသော နိုငျငံ လူပီသသောနိုငျငံ